Teboka vavaka hanoherana ny vaovao ratsy sy ny fomba fampiasa | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka hanoherana ny vaovao sy ny fomba ratsy
Androany isika dia hiatrika teboka am-bavaka mifanohitra ratsy vaovao sy Utterances. Ity vavaka ity dia mitarika antsika amin'ny zavatra tokony hoheverin'ny ray aman-dreny tsara. Ny iray amin'ireo nofy ratsy indrindra nataon'ny ray aman-dreny dia ny maheno ny vaovao momba ny fahafatesan'ny zanany. Mety handrava tokoa. Mandidy aho amin'ny maha-tenin'ny Andriamanitra ahy, tsy misy ray aman-dreny handre vaovao ratsy momba ny zanany amin'ny anaran'i Jesosy.
Alohan'ny hidirantsika tanteraka amin'ny lohahevitry ny vavaka dia andao aloha haka sary avy ao amin'ny soratra masina. Ohatra iray lavorary dia ny tantaran'i Eli mpisorona. Tsy nampiofana tsara ny zanany i Eli fa lasa ratsy toetra sy nanota tamin'Andriamanitra be izy ireo. Izany dia nampidina ny fanozonan'Andriamanitra taminy sy tamin'ny mpianakavin'i Ely. 1 Samoela 4: 17–18 Ary ilay mpitondra hafatra dia namaly hoe: Ny Isiraely efa nandositra ny Filistina, ka be dia be no ringana. Ary maty koa ny zanakao mirahalahy, Hofinia sy Finehasa; ary ny fiaran'Andriamanitra dia voasambotra. " Ary raha vao nilaza ny amin'ny fiaran'Andriamanitra izy, dia nianjera niala teo amin'ny sezany teo anilan'ny vavahady, ary tapaka ny hatony, dia maty izy, satria anti-panahy sady mavesatra. Ary nitsara ny Isiraely efa-polo taona izy.
Tsy nahatana ny fanaintainan'ny fahafatesan'ny zanaka roa indray mandeha i Eli, rehefa tonga ilay vaovao dia maty koa izy. Mamoaka didy indray aho fa tsy misy ray aman-dreny mijaly amin'ny vaovao ratsy amin'ny zanany na an-trano izy na any ivelany. Ny vaovao momba ny fahafatesan'ny ankizy dia tsy ny vaovao ratsy na ny fampitaovana mety hiteraka olana eo amin'ny fiainan'ny olona iray ihany. Ny vaovao ratsy amin'ny ankapobeny dia tranga tsy mahafinaritra mitranga. Ny endrika vaovao ratsy rehetra kasain'ny fahavalo ho entinao dia nofoanana amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra.
Ry Andriamanitra Andriamanitra ô, foiko ny karazan-baovao ratsy rehetra nomanin'ny fahavalo ho ahy, nofoanako amin'ny herin'i Jesosy ny hery. Ovaiko ny fisehoan-javatra ratsy rehetra napetraky ny fahavalo mba hangalariny ny hafaliako, novaiko ho fifaliana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, feno ny ran'i Jesosy ny zanako rehetra. Na iza na iza tian'ny fahavalo alaina mba hitondra vaovao ratsy amin'ny fonenako dia foanako amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ny zanako dia tsy ho faty fa ho velona hanambara ny asan'ny tompo amin'ny tanin'ny velona amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, tonga hamely izay teny ratsy rehetra nilaza tamin'ny fiainako aho, noho ny herin'ny lanitra no ananarako azy ireo. Ny teny rehetra izay tsy mitondra afa-tsy olana amin'ny fiainako dia aringako amin'ny afon'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, fa voasoratra hoe iza no miteny ary tonga izany rehefa tsy nandidy ny Tsitoha. Tonga hamely ny lela ratsy rehetra aho mandrora ny ratsy amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Manome didy aho fa ny herin 'Andriamanitra Tsitoha dia hanova ny teny ratsy rehetra izay nolazaina teo amin'ny fiainako tamin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Andriamanitra Andriamanitra ô, ianao no Andriamanitra amin'ny mety rehetra, toa ny nanerenanao an'i Balama hitso-drano ny zanak Isreal fa tsy hanozona, mivavaka aho mba hataonao mitahy ahy ny fahavaloko fa tsy manozona ahy amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka aho fa ny famindram-ponao dia hanovanao ny teny ratsy ataon'izy ireo ho fitahiana amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, ny soratra masina nampahafantatra ahy fa maharitra mandrakizay ny famindram-ponao. Mivavaka aho mba hosaronanao ahy amin'ny famindram-ponao aho ary tsy avelanao ho tanteraka mandritra ny androm-piainako amin'ny anaran'i Jesosy ny drafitry ny fahavalo. Tompoko, ny biby demonia na ny maso ivoho rehetra izay nalefan'ny fahavalo hamboly ny voan'ny faharatsiana teo amin'ny fiainako, mivavaka aho mba ho faty amin'ny anaran'i Jesosy ny biby toy izany.
Ny lehilahy rehetra ateraky ny vehivavy miandry vaovao ratsy momba ahy, dia mivavaka aho mba hamonoan'ny anjelin'ny Tompo azy ireo amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka aho mba tsy hisy ratsy hanatona ahy na olona manodidina ahy. Mivavaka aho mba hametrahan'ny tanan'Andriamanitra Tsitoha ny zava-drehetra momba ahy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mety iharan'ny trangan-javatra ratsy amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Tompoko, manapa-kevitra aho fa tsy ho lasibatry ny tandindon'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka aho mba handeha eo alohako amin'ny herin'i Jesosy ny herin'Andriamanitra Tsitoha. Tonga nanohitra ny lozam-pifamoivoizana niseho tamin'ny fombako aho, nanohitra ny karazana fakana ankeriny amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka aho mba hahatratra ny olona manodidina ahy amin'ny anaran'i Jesosy ny marik'Andriamanitra.
Ry mpiasan'ny maizina miandry ny vaovao ratsy halefa momba ahy na ny fianakaviako, mivavaka aho fa handevona anao izao ny afon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Izay lazain'ny olon-kafa fa misy fianjerana, mivavaka aho mba hisandratra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy haninona tsy hanakaiky ahy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho tonga fihomehezana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Tonga manohitra ny drafitry ny devoly hamarana ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho. Amin'ny sisa amin'ity taona ity dia mandà tsy ho mpitondra vaovao ratsy amin'ny anaran'i Jesosy aho ary tsy mety mandray iray momba ny olona akaiky ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Avotako ny ra sarobidin'i Kristy ny andro sisa tavela amin'ity taona ity. Nanafaka ny tenako sy ny olona manodidina ahy tamin'ny zana-tsipika ratsy izay hanidina amin'ny volana sisa amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Previous lahatsoratraTeboka vavaka ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Corps manompo ny firenena
Next lahatsoratraLesona 5 hianarana avy amin'ny tantaran'i Jakôba sy i Esao
Mulundu 15 Jolay 2021 Amin'ny 7:31 maraina
Que le Seigneur Jesus, vous bénisse abondamment quand j'ai lu vos déclarations, j'aime les avoir pour la gloire de Dieu.
30 Vavaka mba hahazoana fitahiana amin'ny bevohoka
Tombontsoa ho an'ny fanomanana mariazy
Teboka vavaka ho fanatanterahana ny lahatra